အပိုင်း: စိတ်ကျန်းမာရေး 2022 ဇူလိုင်လ
စိတ်ကျန်းမာရေး 2022, ဇူလိုင်လ
PTSD ရောဂါလက္ခဏာများနှင့် ကုသခြင်း- National PTSD Awareness Day တွင် စိတ်ဒဏ်ရာမှ ပြန်လည်ရယူရန် နည်းလမ်း6ခု (2022)
ဤအမျိုးသား PTSD အသိပညာပေးနေ့တွင်၊ သင့်အား ပြန်လည်နာလန်ထူရန်နှင့် သင့်ဘဝလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိစေရန် ကူညီပေးနိုင်သည့် နည်းလမ်းခြောက်ခုကို လေ့လာပါ။
စိတ်ကျရောဂါနှင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများအတွက် အွန်လိုင်းအတိုင်ပင်ခံကို ရှာဖွေနေပါသလား။ ဦးနှောက်သည် အဖြေဖြစ်သည်။ (2022)
စိတ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ကူညီရန် အွန်လိုင်း အကြံပေးဝန်ဆောင်မှုကို ရှာဖွေနေပါသလား။ ဤတွင် Cerebral သည် သင့်အား ကောင်းမွန်လာစေရန် မည်သို့ကူညီပေးနိုင်မည်နည်း။
ဝန်ဆောင်မှုခွေးများသည် PTSD ရှိသော စစ်ပြန်များကို ကူညီနိုင်သည် – ၎င်းတို့သည် လက်တွေ့ကျသောနည်းလမ်းများဖြင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုကို လျှော့ချနိုင်သည်ဟု သက်သေအထောက်အထားများ ပြသသည် (2022)
PTSD ရောဂါလက္ခဏာများအတွက် အကူအညီရယူရန် စစ်မှုထမ်းဟောင်း အများအပြားသည် ဝန်ဆောင်မှုခွေးများထံ လှည့်လာကြသည်။
G.R.E.A.T. Stress ကို ကိုင်တွယ်နည်း (2022)
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ် ကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့ လူတွေ ပိုများလာတာနဲ့အမျှ အားလုံးခံစားနိုင်ဖို့၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ မပျောက်ကွယ်သွားအောင် မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကို ချောင်းကြည့်ဖို့ မျှော်လင့်ချက်ကို ခွင့်ပြုပေးလိုက်ပါတယ်
သင်၏နာရီများကိုပြောင်းပါ။ သင့်ကျန်းမာရေးကို သတိထားပါ။ (2022)
လူတွေက တနင်္ဂနွေနေ့က ပိုငန်တယ်လို့ထင်ရင် Daylight Savings Time (DST) က သူတို့အိပ်ချိန် တစ်နာရီထက် ပိုကုန်ကျတာကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Pandemic-Caused PTSD- နောက်တစ်ခု ကျန်းမာရေးအကြပ်အတည်းကို ကုသခြင်း။ (2022)
ခန္ဓာကိုယ်အပေါ် Covid-19 ၏ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအပြင်၊ Covid-19 ၏လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအပေါ်ကြီးမားသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပေါ်တည်မြဲသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်စိုးရိမ်မှုများတိုးပွားလာသည်။
ဆရာဝန်တစ်ဦးသည် သူ၏ Hippocratic Oath ကို သတ်သေခြင်းဖြင့် ချိုးဖျက်သောအခါ (2022)
လွန်ခဲ့သည့် နှစ် 20 အတွင်း အမေရိကန်တွင် အသက် 16 နှစ်မှ 64 နှစ်ကြား သတ်သေနှုန်း 40% တိုးလာခဲ့သည်။ ထိုအထဲတွင် ဝှက်ထားသော ရာခိုင်နှုန်းများမှာ သမားတော် သတ်သေခြင်းဖြစ်သည်- ပြီးမြောက်သော သူများဖြစ်သည်။
နိုင်ငံရေးအကြမ်းဖက်မှုမှာ ပါ၀င်ပြီးတာနဲ့ ပြန်လုပ်ရတာ ပိုလွယ်လာပါတယ်' - နိုင်ငံရေးအကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ ကက်ပီတိုလ်ရှိ အဖြစ်အပျက်များကို ရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ (2022)
နိုင်ငံရေးအကြမ်းဖက်မှုမှာ ပါ၀င်ပြီးတာနဲ့ ပြန်လုပ်ရတာ ပိုလွယ်လာပါတယ်' - နိုင်ငံရေးအကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူ ကက်ပီတိုလ်ရှိ အဖြစ်အပျက်များကို ရောင်ပြန်ဟပ်သည်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးပေးသည့် တိရစ္ဆာန်များအတွက် အခမဲ့ လေယာဉ်စီးခြင်း မရှိတော့ပါ။ (2022)
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဌာန၏ စည်းမျဉ်းအသစ်တွင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးပေးသည့် တိရစ္ဆာန်များသည် အခွင့်ထူးများ ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။
လူများ အဆက်အဆံမရှိခြင်းနှင့် အလေးမထားခြင်းခံရခြင်းဟု ခံစားလာရသောအခါတွင် လူကြိုက်များမှု ပေါ်ပေါက်လာသည်။ (2022)
အမေရိကန် လူ့အဖွဲ့အစည်းက အလယ်မှာ နစ်မွန်းနေတယ်။ 2020 ခုနှစ် သမ္မတရွေးကောက်ပွဲတွင် လူအများအပြားသည် ၎င်းတို့၏ဆန္ဒမဲရရှိထားသူကို ထောက်ခံအားပေးရန် စိတ်ပါလက်ပါထက် အခြားသမ္မတလောင်းကို မဲပေးရန် မဲရုံများသို့ လာရောက်ခဲ့ကြသည်။ ဤပြင်းထန်သော နှစ်ခြမ်းကွဲမှုသည် ကွဲကွဲပြားပြား အမေရိကန်ဖြစ်ပြီး အားကောင်းသည့် ပါတီနှစ်ခုမှ ပေါက်ဖွားလာခြင်းဖြစ်သည်။
NIH သည် လူမည်းလူငယ်များတွင် သတ်သေခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းကြောင်းများကို ထည့်သွင်းရှာဖွေခြင်း။ (2022)
မိမိကိုယ်ကို သတ်သေခြင်းသည် ဆယ်ကျော်သက်များတွင် သေဆုံးမှု ဒုတိယအများဆုံး အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ ဆယ်ကျော်သက်5ယောက်မှာ 1 ယောက်လောက်က သတ်သေဖို့ စဉ်းစားကြပြီး 10 ယောက်မှာ 1 ယောက်က အစီအစဉ်တကျ ရေးဆွဲကြပါတယ်။ လူမည်းလူငယ်များအတွက်၊ ထိုအကြံဉာဏ်များသည် လုပ်ဆောင်ချက်အဖြစ်သို့ တိုး၍တိုးလာသည်။
နာကျင်စရာများစွာသော ပြန်လာမှု- လက်ဆောင်ပစ္စည်းများကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခြင်း။ (2022)
နာကျင်စရာကောင်းသောလက်ဆောင်ပေးခြင်းသည် သူငယ်ချင်းများနှင့် ချစ်ရသူအား မလိုလားအပ်သော အရာများကို ဖယ်ရှားပစ်ရန် ကြိုးစားစေမည့် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်စေနိုင်သည်။ မလိုလားအပ်သောလက်ဆောင်များသည် အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးသနည်း၊ ၎င်းတို့နှင့် သင်ဘာလုပ်သင့်သနည်း။
တရားမျှတမှု၏ စိတ်ပညာ- အမေရိကန်အချို့က ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို အဘယ်ကြောင့် မယုံကြည်ကြသနည်း။ (2022)
ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်သော 2020 သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကဲ့သို့ ပဋိပက္ခများစွာသည် တရားမျှတသောရလဒ်များကို လှည့်ပတ်နေသည်။ ဒါကတော့ "တရားမျှတမှု" ရဲ့ နောက်ကွယ်က စိတ်ပညာပါ။
Covid-ဖန်တီးသောစိုးရိမ်ပူပန်မှု; ဖန်ဆင်းခြင်း၌ကပ်ရောဂါ (2022)
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုကြားတွင် စိုးရိမ်စိတ်များ မြင့်တက်လာသည်။
Online Dating-Tested မှ အကြံဉာဏ်အချို့ (2022)
အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ခြင်းအတွက် စိတ်ပျက်နေသူများအတွက် စေ့စပ်ရေးအစီအစဥ်၏ စည်းမျဉ်းအသစ်သည် စနစ်တကျဖြစ်နိုင်သည်။
မင်းက ပိုပြီး စိတ်မြန်နေသလား။ သင့်ဖုန်းကို အလွန်အကျွံသုံးနေပါသလား။ (2022)
စိတ်အားထက်သန်သော ရွေးချယ်မှုသည် အချက်နှစ်ချက်ဖြင့် မောင်းနှင်သည် - သင့်ကိုယ်သင် ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းနှင့် သင့်အပြုအမူများ၏ အလားအလာရှိသော ရလဒ်များနှင့် အနာဂတ်အကျိုးဆက်များကို စိတ်ကူးပုံဖော်နိုင်စွမ်း
Pandemic Naysayers သည် ICU အပြည့်ရှိမရှိကြည့်ရန် ဆေးရုံသို့ ခိုးဝင်သည်။ (2022)
ကြံစည်မှုသီအိုရီများသည် အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင်သို့ ခိုးဝင်ရန်ကြိုးစားပြီးနောက် Provo၊ Utah ဆေးရုံသည် ၎င်း၏လုံခြုံရေးသတိထားမှုများကို တိုးမြှင့်ထားသည်။
ဆိုရှယ်မီဒီယာကို နှစ်သက်ပါသလား။ သင်သည် ဒုက္ခထဲသို့ ဆင်းသွားနိုင်သည်။ (2022)
ဆိုရှယ်မီဒီယာက မင်းကို ဘယ်လိုခံစားရလဲ။ ယခုလေ့လာမှုအသစ်သည် သင်၏ Facebook feed သည် သင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကို မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကို ပြသထားသည်။
အကြိုက်ဆုံးတေးသွားကို အလျင်စလိုကြားလိုက်ရခြင်းသည် မှန်ကန်သည်။ (2022)
ဒါကို သင်သိပေမယ့် သိပ္ပံပညာက အတည်ပြုလိုပါတယ်- အကြိုက်ဆုံး တေးဂီတကို နားထောင်ခြင်းက ဒိုပါမင်း လို့ခေါ်တဲ့ အအေးဓာတ်ကို ဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ ဒေါမနမ်ဟော်မုန်းကို ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ရှည်လျားပြီး ပင်ပန်းတဲ့အလုပ်ရဲ့ ဘဝဟာ Dementia နဲ့ ကုန်ဆုံးနိုင်ပါတယ်။ (2022)
လက်ဖြင့်လုပ်အားသည် ဘဝနှောင်းပိုင်းတွင် စိတ်ကျရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ခြေကို တိုးမြင့်စေနိုင်သည်။
ဆရာ-ကျောင်းသားဆက်ဆံရေး၏ ရေရှည်အကျိုးများ (2022)
ကလေး၏ အစောပိုင်းနှစ်များအတွင်း အပြုသဘောဆောင်သော ဆက်ဆံရေးများ ထူထောင်ခြင်းဖြင့် ကလေးသည် အရွယ်ရောက်သောအခါတွင် အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ရွေးကောက်ပွဲနေ့ ဖိအားကို ကျော်လွှားရန် ကျွမ်းကျင်သူ အကြံပြုချက် (2022)
ရွေးကောက်ပွဲအတွက် စိတ်ဖိစီးမှုများ၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ သို့မဟုတ် အိပ်ရေးပျက်ခြင်းများကို တွေ့ကြုံနေရပါသလား။ ဒါတွေကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက ပြောတယ်။
အချို့သူများအတွက်၊ မီးဖွားပြီးနောက် စိတ်ကျရောဂါသည် တိုတောင်းသော စိတ်ဆင်းရဲမှုမဟုတ်ပါ။ (2022)
မီးဖွားပြီးနောက် စိတ်ကျရောဂါသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ၎င်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည့် တစ်နှစ်တာအချိန်ကာလမဟုတ်ဘဲ သုံးနှစ်အထိကြာနိုင်သည်။
စိတ်ဓာတ်ကျနေသလား၊ ဝမ်းနည်းနေသလား၊ (2022)
လူတိုင်းသည် တစ်ချိန်မဟုတ် တစ်ချိန်တွင် စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းဖြစ်သည် - သို့သော် သင်သည် အပြာရောင် ခံစားရခြင်း သို့မဟုတ် ၎င်းသည် ပို၍လေးနက်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ မည်သို့ သိနိုင်မည်နည်း။
ချစ်တယ်! လူတွေက ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေနဲ့ သရဲခြောက်တဲ့ အိမ်တွေကို ဘာကြောင့် ကြိုက်ကြတာလဲ။ (2022)
ရုပ်ရှင်များ၊ သရဲခြောက်သောအိမ်များ၊ ကောင်းကင်ယံတွင် ရေငုပ်ခြင်းကဲ့သို့သော အတွေ့အကြုံများပင်လျှင် လူများစွာသည် ကြောက်စရာကောင်းသောအရာများကို ဆွဲဆောင်ခံရသည်။ အဲဒီလို့ဘာဖြစ်လို့?
Autistic ကလေးများသည် နို့စို့အရွယ်တွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဝန်ဆောင်မှုများကို ပိုမိုအသုံးပြုကြသည်။ (2022)
ရောင်စဉ်တန်းပေါ်ရှိ မွေးကင်းစကလေးငယ်များသည် ပျမ်းမျှတစ်နှစ်သားအရွယ်များထက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဝန်ဆောင်မှုများကို နှစ်ဆမှ သုံးဆ ပိုမိုအသုံးပြုကြောင်း လေ့လာမှုအသစ်တစ်ခုက တွေ့ရှိခဲ့သည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ကူးစက်ရောဂါ ခံစားချက်များ (2022)
တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုများရှိနေသော်လည်း၊ လူသားမျိုးနွယ်သည် ကပ်ရောဂါနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှေ့ဆက်ရန် နည်းလမ်းရှာဖွေနေပါသည်။
2013 နှင့် 2018 ခုနှစ်ကြားတွင် အမေရိကန်တွင် ကိုကင်းအလွန်အကျွံသုံးစွဲမှု သုံးဆ (2022)
2017 ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် နေထိုင်သူတစ်ဦးသည် ကားမတော်တဆမှုထက် မူးယစ်ဆေးအလွန်အကျွံသောက်ခြင်းကြောင့် သေဆုံးနိုင်ခြေပိုများသည်။
ဤနေရာတွင် အံ့သြစရာမရှိပါ- ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက် အကူအညီ လိုအပ်ပါသည်။ (2022)
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးက COVID-19 ဟာ စိတ်ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ကလေးများသည် စိတ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လိုအပ်သော်လည်း ၎င်းကို မရရှိကြပါ။ (2022)
ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ ကလေးများနှင့် စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် အချို့သောမိဘများသည် ၎င်းတို့၏ကလေးလိုအပ်သောအကူအညီကို မရှာကြသည်၊ သို့မဟုတ် မတွေ့နိုင်ပေ။
အဲဒါက ဘယ်သူနဲ့မှ မဟုတ်ဘူး၊ ငါတို့ကို ပြုံးရယ်စေတဲ့အရာပါ။ (2022)
သုတေသနပြုချက်များအရ သူငယ်ချင်းများနှင့် မိသားစုများသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ပျော်ရွှင်စေနိုင်သော်လည်း ပျော်ရွှင်မှုသည်လည်း အရေးကြီးပါသည်။
ရန်ငြိုးဖွဲ့ခြင်းသည် သင့်နှလုံးကို ထိခိုက်စေသည်၊ အထူးသဖြင့် နှလုံးဖောက်ပြီးနောက် (2022)
ဒေါသနှင့် ရန်ငြိုးဖွဲ့ခြင်းသည် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း ဖိစီးမှုနှင့် တင်းမာမှုကို ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ သိထားသော်လည်း ၎င်းသည် ပိုမိုပြင်းထန်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ၎င်းသည် သင်၏ဒုတိယနှလုံးဖောက်ပြန်နိုင်ခြေကို တိုးမြင့်စေနိုင်သည်။
အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်သေဆုံးပြီးနောက် ကလေးတစ်ဦးကို ကူညီပေးခြင်း (2022)
ဝမ်းနည်းမှုသည် တစ်စုံတစ်ဦး သို့မဟုတ် တစ်စုံတစ်ခုကို ချစ်မြတ်နိုးခြင်း၏ မလွှဲမရှောင်သာသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များ ဆုံးရှုံးခြင်းကို တွေ့ကြုံခံစားရသော ကလေးများသည် ဤဝမ်းနည်းဖွယ်အဆင့်ကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ရန် အကူအညီနှင့် လမ်းညွှန်မှုများ လိုအပ်ပါသည်။
ညင်သာစွာ 10 မိနစ် နှိပ်နယ်ပေးခြင်းသည် စိတ်ကို ပြေလျော့စေပါသည်။ (2022)
နှိပ်နယ်ခြင်းမှ အကျိုးကျေးဇူးရရှိရန် အချိန်များစွာ မလိုအပ်ပါ။ 10 ယူပြီး အနားယူပါ။
ဗိုင်းရပ်စ်ကို သီးခြားခွဲထုတ်ခြင်း၊ အစာစားခြင်းရောဂါကို နိုးထစေခြင်း။ (2022)
COVID-19 ပြန့်ပွားမှုကို ထိန်းချုပ်ရန် အသုံးပြုသည့် နည်းဗျူဟာမှာ အစားအသောက်ပုံမမှန်ခြင်းကို ပိုဆိုးစေပါသည်။
Eating Disorder Treatment အတွက် Phone Apps ကိုရှာပါ။ (2022)
အထူးသဖြင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်အကူအညီရယူရန် အလွန်ခက်ခဲပါက အစားအသောက်မမှန်သောကောလိပ်ရှိ အမျိုးသမီးများကို အက်ပ်များက ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှု နှောင့်နှေးခြင်းတို့သည် များစွာသော ဆေးကုသမှုများ (2022)
ကပ်ရောဂါ၏ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး တိုးလာခြင်းသည် စိတ်ကျန်းမာရေးအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိပြီး လူနာများအား ၎င်းတို့၏ ရက်ချိန်းများသို့ မသွားစေရန် တားထားနိုင်သည်။
CBT- သင့်ဦးနှောက်က နာကျင်မှုကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရာမှာ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ (2022)
နာတာရှည်နာကျင်မှုကို ရိုးရာအကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများဖြင့် ကောင်းစွာမကုသနိုင်ပါ။ သိမှုအမူအကျင့်ကုထုံးကဲ့သို့ အခြားသောကုထုံးများသည် ပိုမိုအောင်မြင်နိုင်သည်။
အွန်လိုင်းတူးလ်က သင့်အား မှန်ကန်သော စိတ်ကျန်းမာရေးအက်ပ်ကို ရှာဖွေရန် ကူညီပေးနိုင်သည်။ (2022)
လူတွေရဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးကို ကူညီပေးဖို့ဆိုပြီး အပြင်မှာ အက်ပ်များစွာနဲ့၊ သင့်အတွက် သင့်တော်မယ့်တစ်ခုကို ဘယ်လိုရှာနိုင်မလဲ။
ဆိုဒါနှင့် ဆယ်ကျော်သက်များ၊ ပေါင်းစပ်မှုသည် ရန်လိုမှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ (2022)
ဆယ်ကျော်သက်များသည် ဆိုဒါ သို့မဟုတ် အချိုရည်များ သောက်သုံးသောအခါတွင် အဝလွန်ခြင်းနှင့် ဆီးချိုရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေ တိုးလာကြောင်း သိရှိရသော်လည်း မိဘများကလည်း ရန်လိုမှုကို အလေးထားသင့်သည်ဟု သုတေသီများက ပြောသည်။